Ergada Somalida ee ku sugan xarunta shirka ee Mbagathi oo cunto la'aan soo wajahday kadib markii.......
Ergada Somalida ee ku sugan xuranta wada hadalada soomaalida ee Mbagathi,ayaa maanta (May 4) waxaa lagu soo rogay xaalad Cunto la'aan,kadib markii ay uu Guddamiyaha Shirka Mbagathi Ambassador Kiplagat uu amar ku bixiyay in ergada maanta cuntada laga joojiyo, maadaamo la dhaafay xiligii loo qabtay ergada.
Qorshada IGAD ee ah in ergada lagu soo koobo 203,Si kastaba ha noqotee arintan ayaa u muqaatada in qorshaha IGAD aheyn mid la fududeeysan karo,maadaamo uu hadalkaas horey u soo jeediyay Wasiirka Arimada Dibada Kenya Kolonzo Kusyoka, oo dhanka kalena ay taageero u muujiyeen Deeq bixiyaasha Shirka, oo iyagu sheegay in shirka ay ku baxday dhaqaalo aad u badan, loona baahanyahay in ergada la yareeyo.
Dhanka kale warar aynu ka helnay ilo lagu kalsoonaankaro, ayaa iyagu maanta waxa ay inoo sheegeen in ay IGAD ay gursheynayso, in ay Eragda u diyaariso Dayuurada lagu daad gureeyo ergooyinka somalida.
Sidoo kale DKMG-ka Iyo Golaha Samato bixinta Qaranka somaliyeed, ayaa iyagu waxa ay bilaabeen qorshe ay ku daad gureynayaan,Ergadoodii ka dagneed hoteelada kala ah 680 , Madiriyan , KCCT iyo waliba Safari Parki Hotel ,iyagagoo u uguuriyay hoteelo ku yaala Xaafada islii.
Si kastaba ha'aahaatee xaalada cunto joojinta iyo guri ka saarida ergada ee maanta soo wajahday,ayaa waxa ay noqotay mid ay eragooyin badan ay ka wawdaan,sidoo kale warar hoos hoose oo aynu sidoo kale ka helnay golaha SRRC-da ayaa iyaguna waxa ay sheegaayaa in ay gabihaanba warqad aysan gudbin doonin Guddmiyah Shirka,kana qeyb qaadandoonin wajiga sadaxaad ee shirka, hadii uu wasiirka ka laabanin qoraalkiisii ahaa in ergada laga dhigi 203.